Inona avy ireo varavarana fiarovana? - TSINFA
Inona avy ireo varavarana fiarovana?
Mba hananana ny fahaiza-miady amin'ny halatra, ny varavarana miady amin'ny halatra dia tsy maintsy mandalo fizotry ny famokarana sarotra sy henjana.
2. Fanamboarana takelaka anaty trano
3. Fanamboarana sary an-trano
7.Welding ampahany kely
Famafazana plastika 10.
11. Fanontana fanontana
Ilaina ny fikirakirana 11:
1. Fanapahana takelaka: ny fizotran'ny fanapahana dia rohy tena lehibe amin'ny famokarana varavarana. Ny hafainganam-pandeha sy ny kalitao dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fandrosoana sy ny kalitaon'ny varavarana azo antoka. Amin'ny famokarana tena izy dia ilaina ny misafidy ny milina fanetezam-bary mifanaraka amin'ny hatevin'ny lovia, mba hisorohana ny fanapahana hateviny. Ny elatra ambony amin'ny milina fanetezana dia miorina amin'ny fitoeran'ny fitaovana, ary ny elatra ambany dia miorina amin'ny fitoeram-piasana. Alohan'ny hidirany amin'ny milina fanetezana, ny zoro lovia dia mila ahitsy sy amboarin'ny fitaovana mba hampihenana ny fanodikodinan'ny lovia, mba hahazoana workpiece avo lenta.
2. Fametahana takelaka eo am-baravarana: arakaraka ny lamina fanaovana embossing dia natao ny maty, ary ny taonina lehibe, ambony latabatra kely ary andry telo sy andry valomilina fanaovan-gazetydia ampiasaina hanamboarana haingana ilay takelaka vy vita anaty hatsiaka na lovia vy. Nandritra ny embossing, ny peratra sisiny dia ampiasaina hanindry ny manodidina ny lovia, ary avy eo ny lamina tadiavina dia azo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny cores die ambony sy ambany. Amin'ny alàlan'ny fanovana ny fotony bobongolo, ny milina iray dia azo ampiasaina hanindriana modely isan-karazany, ary tsara ny vokany anaovana embossing, mazava ny lamina ary matanjaka ny fahatsapana telo-refy. Ny tsindry miasa, ny hafainganam-pandeha ary ny fikapohana ny tsanganana valo andry valo andry press dia azo ahitsy ao anatin'ny faritra voafaritra voafaritra mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny masinina dia manana rafitra herinaratra mahaleo tena sy rafitra herinaratra, ary mandray fanaraha-maso afovoany bokotra, izay afaka mahatsapa fomba fiasa telo: manual, semi-automatique ary automatique. Afaka mahatsapa fomba fanindriana roa izy: fanerena tsy tapaka sy elanelam-potoana voafetra. Ny fandidiana dia tsotra sy mety, ary ny masinina dia mitsitsy angovo ary mahomby.
3. Amboaran-tsarimihetsika varavarankely: ampiasao karazana boaty gantry press press miaraka amina embossing frame ho an'ny press mba hahazoana ny lamina takiana. Ny milina fanaovana embossing varavarana dia mandray rafitra misokatra, izay ara-toekarena sy azo ampiharina. Ny fifehezana hydraulic dia mandray ny rafitra miorina amin'ny valizy cartridge hampihena ny teboka ando. Izy io dia manana hetsika azo itokisana, androm-panompoana lava, tanjaka sy henjana ary bika tsara tarehy.
4. Punching: totohondry misy tsindry bokotra 25t, 35t. Aorian'ny fametrahana ny lovia ao anaty totohondry dia vita ny fizotran'ny kitapom-baravarana lehibe, ny lavadavodin'ny sisiny, ny lavaka famandrihana, ny lavaka lakolosy, ny lavadavaka am-baravarana ary ny lavaky ny maso mba hahazoana antoka ny toerana marina sy ny habeny marina.
5. Fametahana: arakaraka ny fepetra takiana amin'ny vokatra varavarana miady amin'ny halatra, ny lovia dia apetraka eo amin'ny milina fametahana varavarana miaro tena amin'ny halatra mba hametahana ny toerana voafaritra mialoha amin'ny sisin'ny vavahady fanoherana ny halatra.
6. Miondrika: apetaho eo amin'ny takelaka fiasan'ny milina miolakolaka ny endrika varavarana sy ny varavarana, tsindrio miaraka amin'ny lovia manindry, safidio ny fihenam-baravarana, apetaho ny kapoka, ary fenoy ny dingan'ny fametahana ny varavarana sy ny varavarana aorian'ny famerimberenana imbetsaka .
7. Fantsona fanamafisam-peo kely: ny fizotry ny welding elektrika dia natao ho an'ireo ampahany kely amin'ny varavarana fanoherana ny halatra izay tokony hapetraka mialoha amin'ny famokarana savaranonando, ao anatin'izany ny takelaka misy hinge, takelaka famehezana ambony sy ambany, boaty fanidiana lehibe ary faritra hafa.
8. Phosphating: ny takelaka vy dia atsofoka ao anaty vahaolana pickling sy phosphating. Aorian'ny fihenan-tsetroka, fanotretana, pickling, phosphating ary dingana hafa, dia misy sarimihetsika fiarovana phosphating miorina eo ambonin'ny varavarana miady amin'ny halatra, mba hahazoana antoka fa tsy harafesina ny lovia alohan'ny famafazana, mba hanamorana ny famafazana plastika.
9. Mametaka: fenoy ny elanelana eo anelanelan'ny vavahady fidirana anoloana sy aoriana amin'ny taratasy tantely tantely, landihazo mirehitra ary fitaovana famenoana hafa, ary ampiasao milina fanindriana mafana be sosona hametahana ny tontonana eo am-baravarana mba hahatonga azy hanana endrika.
10. Famafazana plastika: ny fampiasana herinaratra avo lenta amin'ny herinaratra static, polyester, epoxy ary fonosana polymer hafa dia apetaka eo ambonin'ny varavarana manohitra ny fangalarana aorian'ny fosigasiana mba hamoronana sosona miaro amin'ny harafesina.
11. Hamindra pirinty: manafotra "vovoka famindrana" manokana eo ambonin'ny varavaran'ny fiambenana, taratasy fametahana lakaoly ary apetaho. Rehefa afaka 20 minitra amin'ny 165 ℃ dia natsangana ny sosona matevina mahery, tsy mahazaka harafesina, sarotra sy tsara tarehy.
12. Loko fanaovan-tsakafo: ahantony ny varavarana manohitra ny halatra ary alefaso any amin'ny lafaoro ho an'ny fanafoanana loko maripana avo lenta, mba hanamboarana ny vokatra famafazana sy famindrana, ary hampiakarana ny fahaizan'ny anti-halatra mihasimba.
13. Fanadiovana: hodiovina tsara ny varavarana miady amin'ny halatra, ary hesorina ny sisa amin'ny fizotrany teo aloha, ary avy eo fonosina sy hatolotra ara-dalàna ny vokatra.
Amin'izao fotoana izao, ny tsenan'ny varavarana Security dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny tetezamita "manomboka amin'ny habetsahana ka hatramin'ny kalitao". Raha jerena amin'ny fomba fijery makro, eo ambanin'ny fanentanana ny fanavaozana ny fanjifana sy ny fanaovana tanàn-dehibe, malalaka ny vinan'ny tsena manohitra ny halatra. Raha ny fahitana azy kely, miaraka amin'ny fanatsarana hatrany ny fahatsiarovan-tena momba ny fiarovana sy ny filan'ny fiarovana, dia azo antoka fa hisongadina ireo vokatra am-baravarana miady amin'ny halatra tsara sy avo lenta ary hitondra "tombony be loatra" ho an'ireo orinasam-pamokarana. Amin'ny maha fototry ny famokarana azy, ny tsipika fahaverezan'ny famokarana maoderina sy matihanina amin'ny varavarana miady amin'ny halatra dia ho lasa "filàna" an'ireny orinasa mpamokatra ireny.
Mangataha teny kely
Avelao foana ity saha ity.